I-CAN-SPAM izakuvela nini nge-imeyile edlulileyo? | Martech Zone
I-CAN-SPAM izakuvela nini nge-imeyile edlulileyo?
NgoMvulo, Septemba 18, 2006 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
I-FTC ivale uninzi lwe-spammers mva nje. Ugaxekile usengumba omkhulu, ndifumana amakhulu emiyalezo ngosuku. Ndingacoca ii-imeyile (bendihlala ndisebenzisa iMailWasher) kodwa ndayeka. Kukho ezinye iindlela - ukusebenzisa inkonzo ye-SPAM efuna ukuba umntu ngamnye agunyaziswe ukuba andithumelele i-imeyile, kodwa ndiyathanda ukufikelela.
Ngoku ingxaki isasazeka. Ndifumana uluvo kunye nokulandela umkhondo Spam kwibhlog yam. Yonke imihla, ndingena ngemvume kwaye kukho imiyalezo emi-5 ukuya kweli-10 engakhange ibanjwe nguAkismet. Akukho siphoso sabo-inkonzo yabo ibambe ngaphezulu kwe-4,000 yezimvo ii-SPAMs kwibhlog yam.
I-FTC izakuzibandakanya nini nezinye iintlobo ze-SPAM ngaphandle kwe-imeyile? Ndicinga ukuba uthelekiso olu lolu… Ndithenga ivenkile kwisitalato esikhulu enezithuthi ezininzi. Ngokukhawuleza xa ndingena kwaye ivenkile yakwaSPAM ezantsi kwesitrato indifumana, bafuna ukufumana abanye babathengi bam. Ke-babambelela kwiipowusta zevenkile yam bethengisa ivenkile yabo. Abandibuzi mvume- bayayenza.
Kufana nomntu oxhoma ipowusta kwindawo yam engaphambili ebhengeza ivenkile yakhe. Kutheni le nto ingekho semthethweni?
Kwilizwe lokwenyani, ndiza kuba nakho ukukuyeka oku. Ndingamcela lo mntu ukuba ayeke, ndicele amapolisa ukuba abacele ukuba bayeke, okanye ekugqibeleni ndingabamangalela okanye ndibeke ityala. Nangona kunjalo, kwi-Intanethi, andinakuyenza loo nto. Ndiyayazi idilesi ye-SPAMMER… Ndiyayazi indawo yakhe yokuhlala (Apho ahlala khona). Kwenzeka njani ukuba ndingamvaleli? Kubonakala kum ukuba kufanele ukuba sinikwe amanyathelo afanayo olwaphulo-mthetho kunye noluntu esiwenzileyo ukuba indawo yam yokugcina indawo (ibhlog) yayiyidilesi yesitalato yokwenyani.
Lixesha lokuba wandise umthetho kwaye ubeke itekhnoloji ngasemva kwale mithetho. Ndicinga ukuba ii-IP zogaxekile kufuneka zivaliwe ngokuqhubekayo ukusuka kumaseva egama kwihlabathi liphela. Ukuba abantu abanakufikelela kubo, bebeza kuyeka.
tags: ugaxekile-spamemailummiselo we-imeyileftcumgaqo wogaxekile